Apo vakundi Tarira Like vakundwa — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Pakazosvika nguva ndakasvika muzvitsauko pamusoro Championships ake ave Chicago Bull, pakanga pasina zvinoshamisa. Munyori akaudza nyaya yake nenzira akaita kuti pachena: Jordan akazvarwa kuva mukundi. Uye ndizvo zvatinoziva kwaari: kuhwinha nhanhatu Championship zvindori, MVPs shanu, uye 14 All Star kuonekwa (tisingatauri ushe hwake asina kupikiswa yokumhanya shangu mutambo).
kwakadai asina kupikiswa ushe ndiko kazhinji anouya kunotiyeuchidza kutanga patinofunga “mukundi.” Asi ndinoda kuti tibve nzvimbo imwe mhando weNobel. The pamusoro weNobel mhando asina vose makings ane shasha. The pamusoro weNobel aiva utera vari kucherechedzwa kupfuura ake kunyatsoita. The pamusoro weNobel mhando anotarisa zvakawanda sezvinoita muruzi dzimwe nguva.
yakakunda, asi Conquering
Ndichange akatendeseka nemi. Okupedzisira maviri apfuura zvave zvinoshamisa munzira dzakawanda, asi vangobvumira panewo runako zvakaoma. Handisati vakanakidzwa imba yakasimba kutanga upenyu zvishoma maviri. Handina mufaro minsitry anofudza muchechi wakasimba. Asi ndava yave kwazara neutera. Zvakaoma kuti nevokunze kuudza dzimwe nguva nokuti ini sokuti kuita zvinhu zvakanaka zvakawanda. Asi kana chete unogona kuona zvishoma pedyo.
Ndine chisingaperi kuneta chirwere. Ndinoziva, Ndakanga ndambonzwa pamberi kana. Pamwe ndosaka kana yandirova wawanga zvakawanda sezvinoita Kuziva punchi pane rakarongwa Kumbonetswa. Pakutanga here remara achati ndakanga chete mukai kwemaawa matanhatu pazuva, uye aneta nokuti vamwe gumi. Mumakore akatevera gore haana kuwana nani, asi zvakadaro akasiya vakandipa goko chii Ndaimbova. Ndakararama okupedzisira makore manomwe ane neverending kuneta. Ini nokutendeseka kwete kuyeuka kokupedzisira ndainzwa rested- kufanana matochi wangu akafa, asi haana recharged.
Energy wakaita mafuta kuti ose nzvimbo muupenyu hwedu masimba. Tinoda kuti mumwe nomumwe basa, ose kukurukura, pfungwa ose. Uye kana kuti mafuta yakaderera, zvose anotambura. For vamwe chikonzero, muviri wangu haruzotibvumiri ini wedzera. Panzvimbo tangi wangu iripo pamusoro chaipo “E,” uye ndinoedza kuita kuburikidza. Zvinofanira kundisiya achikamhina kuburikidza ose nharaunda hwangu.
Ndinokuudzai izvi zvose, kwete tsitsi dzenyu, asi kupikisa sei munofunga. Vamwe vanogona kutarisa ndakarovha deadlines, ari mwoyo mazuva, neapo makakatanwa muwanano yangu, uye funga, “murume, Muchinda uyu kurasikirwa iye zvino.” Zvinozoita sokuti kurasikirwa kana ndichifanira kuchinja upenyu hwangu urongwa asi zvakare kana kutaurira mwanakomana wangu, “Daddy kuti takaneta kuridza zvakanaka zvino.” Ndingadai nhema kana ndakati hazvina mwoyo uye kuedza. asi, Ndichiri vanoti inotapira kukunda wangu.
Aihwa, Ini handisi rinopfuura revanhu vane weNobel mhando simba; Ndiri chaizvoizvo runako simba. Ndiri rwakasiyana weNobel mhando. Uye Ndinofungidzira vazhinji muri newewo.
A Rudzi Akasiyana Winner
Ndine kukunda, asi kwete nekuti simba rangu yakasimbiswa izvozvo. kukunda wangu zvinoitika pasinei utera hwangu, kunyange zvivi zvangu. Ini handisi akunda uyo akakunda vavengi, vakanochengeta takunda; Ini chaizvoizvo chete kurigamuchira. Ndine kukunda muna Jesu.
Pauro anozvitaura seizvi muna VaRoma:
Sezvazvakanyorwa, "Nokuda kwenyu tinotarisana nokuurayiwa zuva rose; Tinonzi tiri makwai anobayiwa. "No, pazvinhu zvose izvi tiri vakundi nokupfuurisa kubudikidza naiye akatida” (Romans 8:36-37).
Pauro anotora mashoko Pisarema 44, apo weMapisarema unodanidzira kubatsirwa naMwari pakati yomuedzo. Zvino Pauro anoshandisa kuti ndima kuti pfungwa dzake kuti hapana anogona kugadzirisa zvaitwa naMwari kwatiri muna Kristu.
Chimwe chezvinhu unoshamisa zvinhu ndechokuti pashure kutaura zvinhu zvinotyisa: nokuurayiwa, muurayiwe, Pauro anoti kunyange izvozvo tiri vakundi. Kunyange kana isu kurashikirwa, tiri kuhwina. Kunyange kana tiri kuitwa aizokundwa nyika ino rawa, tikaramba vakundi kubudikidza naJesu. Vaduku hondo zuva nezuva regai kusarudza dambudziko redu, nokuti hondo kare akahwina. Hazvirevi kuti vauye kwauri incredible tariro? Kana tiri muna Kristu, tichinyatsoda haagoni kurasikirwa.
pamwe, akafanana neni, uri mwaka tanetseka chaizvo. Ndinoda kukurudzira iwe ane nzira shoma ndinofunga chokwadi ichi.
1. Regai Just Tarisai You
Kana Ndinopedza zuva rangu Achifungisisa utera hwangu uye muchinyunyuta mumwoyo mangu, Ini chete kufudza mwoyo wangu uye mupopotedzane kwenhema pfungwa dzangu netariro. Kana Ndinotarisa ini ndinofunga Varasikirwa, asi kana Ndinotarisa Jesu Ndiri vakayeuchidzwa kuti ini kuhwina. Paakanga kunokunda vavengi vake, akanga kuvakunda nokuda kwedu.
2. Regai Just Tarisai Now
Kana ini ndoga kufunga nhasi kana izvi kare mashoma makore, Ndiri kuedzwa kufunga kuti uku ndiko kuti kucharamba. Asi Jesu akatenga zvisingadaviriki zvinhu kwandiri pamuchinjikwa kuti handina expereienced asi. Ndinoziva Mwari kukwana ikozvino, asi ini kumuziva zvakakwana paya. Achatora kunyange ndipei hachizi muviri mutsva uye kupukuta misodzi yangu zvose.
Tinogonawo kuva nomuedzo kutarisa vaya sevari kuhwina ikozvino. Avo vasina nemiedzo chete uye nemhinganidzo kuti nguva dzose sokuti kwatiri atambudze. Asi chikwata chiri kukunda rechitatu kota haisi nguva dzose chikwata uyo anokunda pakupedzisira. Vakawanda sevari mukuwana nezuva hondo, asi havana kuvimba Iye anenge akunda hondo. Rega tarisai zvino.
Michael Jordan inoramba mumwe mukuru uye akakurumbira zvikuru vakundi isu ndamboona. Asi pane Unobata yakakura kuti vakanga. Uye hapana mumwe wedu zvinodiwa kuhwina hondo isu; Kristu bedzi anogona kuita kuti. Ari akakunda vose vavengi vedu kwatiri: pasina, Satani, uye rufu pacharwo. All zvinotora kubatana chikwata uye vanobatsirwa Unobata ake unotsauka kubva kuchivi uye vanovimba Muponesi. munhu, kunyange dukusa pakati pedu anogona kuva vakundi.
Ichi ndicho chokwadi kuti mumoyo mangu kana Ndakanyora mashoko aya “Sweet Victory”:
Akunda haasi uya ari kuhwina Inning rechinomwe
Ndinoreva kuti zuva apo pfumbu denga anowa panze, ipapo Ndiri kuhwinha nokuti ini kutonga naye
Iva nechokwadi kuti atore kopi “simuka” paunobuda 10.27.14!
Liam • Gumiguru 23, 2014 pa 12:44 pm • pindura
Trip Ndanga kuridza chinonhuhwira kukunda vasiri kumisa rapfuura nomudzimai mazuva, rwekuita kwaMwari muupenyu hwako uye ari kuenda kuti kushanda kuburikidza Album yako. Kukunyengetererai
Emerson Tillman II • Gumiguru 23, 2014 pa 1:08 pm • pindura
Mwari vakuropafadzei BRO.
Victoria Jones • Gumiguru 23, 2014 pa 1:17 pm • pindura
Ndiro unokurudzira shoko rakadaro. rwiyo Your articulates kwounyanzvi ukama pakati kubwinya nguva, uye chin'a misungo. Ndatenda. ikozvino ndinoziva kuti zvose, zvakanaka nezvakaipa, anoburuka achibva Baba Magetsi.
chinhu chose • Gumiguru 23, 2014 pa 1:48 pm • pindura
iverengwe Great! Ndiri saka akakurudzirwa ichi! Ndiri kufunga rwiyo!
Steve • Gumiguru 23, 2014 pa 3:43 pm • pindura
rwendo, rwiyo urwu zvave chikomborero chikuru muupenyu hwangu kare! Baba vangu uye hanzvadzi tine dzimwe nyaya dzoutano kuti vave pakubata kwemakore anoverengeka uye tsananguro yako nei uye sei imi akanyora rwiyo urwu rakanaka uye zvinonyaradza. Ndinokutendai nokuti wechokwadi pakutenda kwako uye kuti vhangeri.
Nathan • Gumiguru 23, 2014 pa 5:06 pm • pindura
Ini ndiri vachishamiswa kuti mafungiro ako achiri simba panguva utera. A wechokwadi anoyemurika.
Lydia • Gumiguru 23, 2014 pa 10:41 pm • pindura
Izvi yaikurudzira saka kwandiri. simba wangu kwave nenguva pamwero sezvo zvako nokuda maviri apfuura… Ndakazobvumirwa chirwere chirwere cheLyme vakaroorana ago uye kurukutika wangu pakupedzisira kuwana kupenya! Ndinovimba unogona pakupedzisira kuwana chinhu kuti kunokubatsira! Uri kuita kudaro zvikuru kupfuura vanhu vanoziva. Zvokushandisa kwamuri! Uri unotikurudzira kwandiri :)
Cheyenne • Gumiguru 23, 2014 pa 11:52 pm • pindura
mukoma wangu ane chirwere kuneta uye ndaida kuziva kana ndaigona zvepabonde iwe vaviri kuitira kuti anogona kutaura newe?
Denise • Gumiguru 24, 2014 pa 1:41 ndiri • pindura
Mwari vakuropafadzei Mr. Barefield. Ndagara chose wakakomborerwa uchiona mharidzo dzenyu, mimhanzi yako, kuverenga nyaya yako uye mbiru. Ndinonamata inoshamisa kuporesa muzita simba raJesu pamusoro muviri wako. Ndinonamatira kuti varambe vachiita simba uye kutsungirira kukubata saka unogona kuita Lords kushanda pasina kuwedzera kuneta asi kuti kuvandudzwa rimwe nerimwe zuva. Ndinonamata zvikomborero pamusoro pako, Jennifer dzako mbiri vaduku. Ndinokutendai Ishe nokuti Williams kuteerera kudana Your muupenyu hwake noufundisi, murume, baba uye Artist. Chiedza chenyu Chichipenya thru hwake. Ndinokutendai Baba, muzita raJesu raMwari, Amen.
duran Lowery • Gumiguru 24, 2014 pa 12:32 pm • pindura
Ndiri mutendi wechokwadi. Munzanga yanhasi zviri nyore chaizvo kuwana divi yakawana kunetseka sei vamwe vanhu vanorarama hupenyu hwavo. Havagoni kumirira SIMUKAI abude. Trip chaizvo a here ini afuridzire kuva chakanakisisa murume ane baba mudzimai ane vana.
Patrick • Gumiguru 24, 2014 pa 12:49 pm • pindura
rwendo, ngaavongwe nokuda kugoverana mwoyo wako murume. Chokwadi iwe uri kutambura uye tichiri kukwanisa kubereka basa unhu kwakadaro zvinotyisa. Mwari chaizvoizvo akashandisa mimhanzi yako kutaura hwangu. Uye ndinofara zvikuru pane vakomana akafanana nemwi pakati mumhanzi (zvakananga hudyu-hop) indasitiri vasiri kutya chokwadi. Ndinovimba Rise haasi Album rako rokupedzisira, asi kana chiri, Ndiri chaizvo zvose Zvawava vakandidzidzisa kwenyu kare 4 Albums.
Vince • Gumiguru 24, 2014 pa 1:00 pm • pindura
Ndinogara akakurudzirwa mapikicha BRO uye ino ingava akanakisisa chete asi! Ndiri kunamatira simba rako uye havagoni kumirira COP album!
Charlana • Gumiguru 24, 2014 pa 1:16 pm • pindura
zvechokwadi Ndinofarira rwiyo yako “Sweet Victory”, inogara iri dzokorora & Ndinotarisira kunzwa vamwe CD. Mwari vakukomborere & mhuri yako & akaramba kubudirira kwamuri!
Chester • Gumiguru 24, 2014 pa 1:26 pm • pindura
Ini achangobva ndakaona maitiro ako pawanga kuno Denver October 9th. Ndakanga ndisina pfungwa pamusoro matenda ako utano kusvikira panguva. Ndakabayiwa mwoyo apo ramakaita rwiyo yako “Sweet Victory.” Iniwo ndave achitambura siyana zvirwere ava nguva makore mana. saka, rwiyo yenyu resonanted neni, uchindiita kuti vatarisana misodzi. Kuva kungoverengera chidimbu dzenyu urwere hwako, Ndakawana kuti wanga achitambura chetezvo ndave kwenguva yakati: Chirwere Kuneta Syndrome. Zvaiva kuburikidza mumuviri wangu zvinotitambudza zvokunzwa neni reliquish kuzvikudza kwangu uye upenyu nokusazvidzora uye akandidzosera kumutsidzira kuzvipira kuna Kristu; pakupedzisira, Ndinoonga kuti izvi zvakaitika kwandiri. Handina chete vakasangana mumwe mumwe munhu ane pfungwa yakarurama zvakatariswa urwere ichi kunounza. Ndakazadzwa kugeza pamwe pakudururwa kwenyasha dzaMwari, Minyengetero vamwe, uye havanzwi kuzvipira mudzimai wangu anondibatsira mberi zvinangwa zvaMwari sezvo ini mberi nezvidzidzo zvangu kupinda muushumiri sezvo muzivi. Tinoshumira Mwari kwete chete kunofambidzana anonzwisisa kutambura munyika, asi vakakunda kuburikidza nawo. Ndinokutendai kwako basa raMwari umambo uye kundizivisa nezveupenyu hwako.
mukristu • Gumiguru 24, 2014 pa 1:51 pm • pindura
rwendo! Wanga kukurudzira kuburikidza mumhanzi uye mumharidzo yako BRO! Ida sei Mwari ari kushandisa iwe! bangers Your Nditorerei goin BRO ! Ndinenge kukunyengetererai newewo! Oh uye -good kucherekedza kuti rwiyo zvakare!
Mitch • Gumiguru 24, 2014 pa 2:31 pm • pindura
Mwari akuropafadzei nokuda dzichiratidza kutenda kwenyu uye kuvimba kuti Achaita kukuporesai nokukusimbisai yose yechokwadi Shweet Victory!!! Nyasha Mwari…
Mackender • Gumiguru 24, 2014 pa 2:43 pm • pindura
Ndakabayiwa zvikuru vakaropafadzwa ino. mwoyo wangu unofara pandaiverenga uye kufungisisa nhaka yangu yemberi Kristu. Mazvita pokumubatira. Havagoni kumirira kuwana album. Ndagara makakomborerwa imi murume.
Erica D. Clanton • Gumiguru 24, 2014 pa 3:43 pm • pindura
Ichi chaiva chii ndaifanira kuverenga uye Sweet Victory chaizvo mwoyo wangu. Thanks Trip yokuitawo chii akapa Mwari nepfambi saka tinogona kuona zvakaratidzwa kwake nokuda hwedu!! Kunyengeterera U!
Isaya • Gumiguru 24, 2014 pa 4:05 pm • pindura
Ida renyu nziyo murume. It nevamwe vaKristu hip nziyo uye uye acharamba kubatsira Mwari kuchinja upenyu hwangu. hondo yedu haisi nokusingaperi sezvo imi munonyatsoziva tripp. Thanks nokuti chiyeuchidzo.
GabeTaviano • Gumiguru 24, 2014 pa 5:50 pm • pindura
Thanks nokuti yakajeka, rwendo. fam Wedu kuCambodia musi Ndira 3rd. Ndine mibvunzo mishoma voga nokuti imi, vachitarisira kubvunza tisati kusiya. Ungakwanisa here pamwe neni kuposhera Email (kuti email Ndaimbova kupindura pano)? Ndichitarira mberi wangu pre-Unorudzi SIMUKAI. basa chaizvoizvo zvikuru!!
ChristyCapp • Gumiguru 24, 2014 pa 11:05 pm • pindura
Ndiri saka akatarira’ dzinoendesa album!! Ndiko rwiyo huru kutanga rugure pamwe. tarenda wechokwadi uye mashoko CHAIYO kuti achinje upenyu.. haisi nothin’ nani kupfuura kuti! CFS sucks uye inoparadza. Ndine akazvigamuchira 18 kukoreji kana kutanga akabuda. Asi iwe unogona kuchikunda uye imi will..with Zvokudya zvakakodzera uye excercise. Saka pane tariro! Prayer kutanga, mvura ose awa. Yandakafuka mvura shamwari yangu yakanakisisa Detox, akatema chena furawa, Pasta uye zvokudya tichitsanya. Vazhinji vedu walkin’ kumativi tasara tisina mvura uye vachiitsiva nezvokudya zvakawanda. Zviri mumiedzo yedu kuti anoshanda matiri kupfuura. Munguva iyoyo yokuva kurwara (vachiri) akanga apo Mwari kwaisava unogona kuita basa rake… Nerombo kuti iwe Album rako fam uye chechi yako & zvikuru mberi nekubudirira!
Jesu • Gumiguru 25, 2014 pa 6:00 ndiri • pindura
kunzwisisa Awesome, kupinda chii munyika aizofanira tione sezvo “kurasikirwa” muupenyu huno. Apo chokwadi zvose tiri tose vakaberekwa vakundwa, kusanganisira vaya, kuti nyika nezvenhanho “vakundi”..! kana, havafaniri kuuya “ruzivo” kana “achiziva” Chokwadi, zvinova “JESU”, Ivo vanoramba vakundwa ..! Kunyangwe, kuti nyika, ivo kuva vakundi ..! Thanks yokuitawo kwako “utera”, kana vari PACHOKWADI, iwe akaitwa STRONGE ..!! Ngaarumbidzwe Ishe, kuti vaizova azivise kwatiri kuburikidza utera hwedu kuti tiri HWAINYATSORATIDZA STONGE nokuda Kumuziva…!! Ramba kudzvanya mberi shamwari yangu uye munin'ina kunyange kana Jehovha anopa iwe nyasha dzake chete mhute huri hwokurwa yenyu ..!! Kukunyengetererai ..!
Ashley • Gumiguru 25, 2014 pa 9:16 ndiri • pindura
Ndakanga ndisingambozivi uri kutarisana hondo iyi. Ndakaverenga bhuku renyu, “upenyu hwakanaka” kwechinguva shure asi regai kurangarira kuona kuti. Ndakabayiwa saka makakomborerwa nyaya yako nhasi, uri wangu mukoma minyengetero. hanzvadzi yangu vanotambura nekuora kuneta chirwere uye zvinondiomera chaizvo kwaari kunakidzwa nezvinhu iye akashandisa. Ndinokutendai nokuti kugoverana, mwoyo wangu anobuda iwe mukadzi wako nhasi. Irwa kurwa kwakanaka. Uri Champion True. Rudo rwaJesu kuti anokunda zvose. P.s. dope rwiyo zvakare!
Rachel • Gumiguru 25, 2014 pa 10:36 ndiri • pindura
Ini ndiri chaizvo Sweet Victory. Ndakateerera pamusoro YouTube uye mukandipa chimvari wangu shure. Ndave kunetseka mwoyo. Ndinofunga tariro yangu pano kwemavhiki mashoma. Havagoni kufunga sei mumwe kuti akaiisa. Tariro ndinzwe kubviswa Mwari uye akanga akaipisisa chikamu zvose. Ndakanga kushevedzera kwaari, uchimukumbira kuti andibatsire kubuda ichi serakaoma mwoyo. Your Sweet Victory mashoko akataura angonanga kuti wakaputsika chikamu pangu retriggered tariro yangu. Nyaya ino rave vakandikurudzira. Mwari ndiye akanaka. Ndakabayiwa nevanhu vanondida kuchechi asi akanga asingazivi kuti kuvabvunza rubatsiro, kana kunyange sei kutsanangura zvandaidzidza kuenda thru. Mwari akasarudza kushandisa iwe, yose nzira kubva Texas. Ndatenda!
Julia kutongokwizwa • Gumiguru 25, 2014 pa 3:01 pm • pindura
rwendo (uye Jess)–
Ndinokutenda chaizvo nokuda rwiyo urwu unokurudzira. Handikwanisi kumirira kuwana Album yako itsva. isu (Vabereki vangu) chete kushandisa mukomana mudiki kuHaiti. Ane palsy. Kunyange yave chakaoma mugwagwa vakaremara ake ose, Ndinoziva kuti Jesu anotipa kukunda pamusoro zvose. Ndakaona kwamuri konzati muSalt Lake City, UT vakaroorana masvondo apfuura, mukandipa tariro yakadaro. Ndatenda!
Uye makorokoto kwamuri uye Mrs. pamusoro itsva muduku. kana iye (kana varo) anozvarwa kana kwete. :) Vanokudai vakomana!
dzako • Gumiguru 26, 2014 pa 8:15 ndiri • pindura
rwendo, Ini ndiri pamusoro sezvo kure kwenyu vaitarisira boka mujinga somunhu kuwana…Caucasian Canadian Amai mashanu anofamba ari Mini motokari! Asi blaring kubva vakurukuri yangu nguva dzose vamwe Rap ane rakadzikama kutenderera Trip Lee! Ndinoda rwiyo Sweet Victory uye chokwadi ichi yakanga birthed nenzira itsva nzira yenyu utano hondo resonated neni. For okupedzisira 8 Handisati akatambura yakafanana utera pashure vakurumidze nokuberekwa mwanasikana wangu makore. Zviri inoninipisa mugwagwa kufamba uye mumwe Ndichiri kudzidza kuvimba Mwari. Ndinokutendai kugoverana tariro yako uye kupa muenzaniso ane unashamed murume waMwari majaya kuremekedza uye kutevedza. Zvikomborero kwamuri, BRO!
pamusoro • Gumiguru 30, 2014 pa 9:59 ndiri • pindura
Downloaded album nezuro uye ndinorida! fav wangu “All Simuka Up”; Ndine pamusoro replay… lol… ngaavongwe nokuti zvinoshamisa Album Trip. Tariro rimwe zuva kurinda kwamuri konzati.
Gąbka • Mbudzi 7, 2014 pa 8:12 pm • pindura
Wow. Izvi nguva yangu yokutanga kuuya mhiri nzvimbo iyi uye ndiri kuda ose namagwatidziro Ndakaverenga saka kure. Ndagara wakakomborerwa saka uye encouraged.This ndizvo chaizvo zvandaida panguva iyi kuziva kuti pasinei utera hwangu achiri anotonga muupenyu hwangu uye ndinogona kutarira kwaari uye nguva dzose anofanira vachakurudzirwa.
Ndakanga ndisingambozivi iwe vachigura ichi, uri muminyengetero yangu. Ndinokutendai zvikuru nokuda kugoverana. Mwari vakuropafadzei zvikuru.
Just akateerera Sweet Victory uye ndava vakaropafadzwa akanga kudaro rwiyo yako! Uye handigoni kumirira kuteerera yose Album. Ndine chokwadi kuti zvose Ndinenge nokuteerera vhiki idzi kuuya. Ramba basa rakanaka!
Latasha • Mbudzi 8, 2014 pa 7:54 pm • pindura
Izvi Blog romukova chaiva chikomborero chakadaro kwandiri. kazhinji, Ini usakanganiswa kunzwisiswa nemhuri, shamwari, kana zvimwe mhuri chechi iri kufamba ichi, asi this post ndibatsirei zvinhu sezvazviri uye kumisa vachinyunyuta pamusoro upenyu. Ndakaona kuti pane chikomborero mukati utera hwedu. zvirokwazvo Mwari anoratidza simba rake / anotida, kutibatsira kukunda matambudziko edu, apo tinoona kuti Iye ndiye chete nzira yatinogona pakubuda. Thanks nokuti pambiru uye rwiyo yako Sweet Victory zvinoshamisa!
TTunique • Mbudzi 17, 2014 pa 9:42 ndiri • pindura
Mwanasikana wangu akatsaurira rwiyo urwu kwandiri. Ini ndisingagoni kurega kuteerera uye vachichema. Ndave achitambura rokuzvidzivirira nyaya nokuda 15 makore. Chekupedzisira 3 Makore akanga pedo gehena. Asi Ishe akanga pakubata nesimba mwoyo wangu munguva iyoyo. Ini pakupedzisira uye vakazvipira kwaari. Ndiri kuwana mhinduro kurudyi uye kubuda zvishoma nezvishoma. Ini handisi panze yose nzira, asi handisi sezvo vaneta sezvo ndakanga. Zvino shamisa!!! rwiyo urwu……rwiyo urwu! misodzi……
Tim • Zvita 4, 2014 pa 1:56 ndiri • pindura
Ndinogara vanonzwa kufara pandinonzwa rwiyo rutsva kubva kwauri kana kuona mharidzo takaisa kana kuverenga Blog renyu. Muri kutuswa! Handizivi zvakananga kuziva chii CFS rakafanana asi ndakazviona. A shamwari mhuri amai kubva chechi yangu anahwo. Pane nguva apo tinoona naye ipapo refu anotambanudza patinopinda regai. Asi pose ndinoita kumuona iye anogara achifara. Pandinoverenga ichi ndakafunga nokuti ndinomuudza nguva dzose sei ndiri kunofuridzirwa naye kuti mukati maro zvose iye anorumbidza Jesu. Iye kwave vakunda nokuti anoramba kufunga pasi ezvinhu. Imi vaviri hunonyanya Zvechokwadi vakundi! Ndafara kuti iwe unogona kuudza mwoyo yenyu nesu. Zvinoreva zvikuru kwandiri.
Burton • Zvita 4, 2014 pa 8:54 pm • pindura
Hamuzivi zvakadini izvi zvinoreva kuti ini. Kana sokunge yose iri pamusoro pako, munoziva kuti uchaita kukunda pamagumo pamwe ichibhururuka mavara! Zvino achiziva zvawakadzidziswa achipfuura manomwe apfuura, unogona kuziva kuti muri muminyengetero yangu BRO. Thanks nokuti kuzarura mwoyo yenyu kwatiri.
Femi • Kurume 16, 2015 pa 5:58 pm • pindura
rwendo, uri achifuridzirwa hombe. SIMUKAI ndiye Album guru uye ndinozvida! Kana pamusoro utano hwako, Ndinotenda kuva kwayo kwekanguva murazvo afflicton kugadzirira nokuda kukudzwa yakaratidza. Mwari zvinoiswa kushandisa imi kupfuura mukoma. saka musaneta. rambai muchitenda uye vachinyengetera. Ndinokudai hama.
Nate • Kubvumbi 26, 2015 pa 9:13 pm • pindura
Chirwere Kuneta akaita akatambudzwa upenyu hwangu kubva pandaiva 13 kana 14 makore ose nzira vakakwira kusvikira chete nyaya masvondo apfuura (ndiri 28 ikozvino). Makore kunyengetera uye kutsvakurudza pakupedzisira zvakatungamirira mhuri yangu uye ini kuti mhinduro; Diet aiva honzeri. Kubvisa zviyo zvose, dheri, nightshades, preservatives uye kupatsanurwa zvokudya kubva hwangu kwakaita kuti pakupora zvakakwana. Handina kumbonzwa nani.
Handizivi kana aigona kuva zvokudya mhinduro yakadaro CFS zvenyu, asi ndaida ndikuzivisei zvakadaro.
Ramba wakadaro rakanaka. Ndinenge kukunyengetererai.
ThomLomas • Zvita 7, 2015 pa 4:29 pm • pindura
Ndinokutendai nokuti kugoverana mashoko aya. Ndinoshuva dai waverenga ichi gore rapera asi handina raireva kuriverenga kusvikira ikozvino. Zvino kuti ndakanga kunzwisisa nei izvi zvaitika zvishoma nani. Thanks zvakare, Mwari komborera.
Brandon Martinez • Kubvumbi 23, 2016 pa 12:49 pm • pindura
Ndinokudai pokumubatira nenyasi muri hombe unokurudzira anoyemurika kuti kufamba kwangu kutenda mwari. Ive akadzidza kuvimba naye ive vakadzidza kuti magwaro kana kushandisirwa hwangu vanova zvikomborero munzira dzakawanda. Imi ndomene zvinokurudzira uye ndinovimba kuti mwari zuva rimwe achandipa mukana kuzosangana nemi uye lecrae mese vakandibatsira kuona upenyu pachinzvimbo rufu. Nezuva dzandinoteerera yeEvhangeri hip uye kutanga mangwanani wangu namwari muchionga nokuti anga ini chizadzisai Ndinoita kofi uye akaisa bluebuds yangu munzeve dzangu uye apandukira vhangeri hip uye kuteerera kudzidza kunyange revaruki mashoko I dont kuziva muduramanzwi nemashoko I dont zvikuru kunzwisisa saka ini lnow zvakadzama zvinoreva nokuti Im zvakadzama. Mumwe muchinyengetera mwoyo chido ndowangu rimwe zuva kutaura kwamuri zvimwe nzira kunyange zvayo mashomanana mashoko Facebook kana foni asi vaizova zvikuru kugara pasi nemi munhu uye kurukura pamunogova kwechiKristu zvitendero uye kupindura mumwe nomumwe vamwe mibvunzo uye zvinovanetsa. ndiri 26 makore Ndine ine ezvinhu uye kare uye Kristu ini achinja zuva rose nokuda kubwinya kwake uye mukuru yakanaka saka ndinogona kuzadzisa panze uye zvinokurudzira vamwe uchapupu hwangu chinoratidza nezviito zvangu kwete namashoko . IM mutendi. Romans 1:16 Ndiri unashamed evhangeri. Ndaizotaura mwari everday nevanhu kunyange shamwari dzangu kutarira kwandiri uye zvakachinja nokuda sei mwari zvakachinja ini. Ndinovimba chaizvo ukaona shoko iri kwandiri uye akariverenga kuburikidza. nyaya yako iri simba uye Kristu mumoyo mako nguva dzose. Ndapota kana uine nguva rimwe zuva rwezuva ini. Ndidavidze. ini Nyora on Facebook. Email ini ID vanoda chete vane kukurukurirana mumwe newe. Btw nyaya yako vakauya misodzi mumaziso angu. Mwari vakukomborere,mudzimai wako,uye vana mumazuva ako ose uye zvose zvaunoita.